Mareykanka oo dambiyo dagaal ka geysnaya Soomaaliya! – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jun 30, 2020 1,723 0
Shabakad lagu magacaabo “The War Horse” oo ka faaloota arrimaha military-ga ayaa baahisay warbixin dheer oo ay kaga hadleyso duullaanka Mareykanka ee Soomaaliya iyo sida shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah ay u gurteen miraha qaraar ee duullaankaasi iyadoo tilmaantay in dalkan ku yaalla bariga Africa uu marti-geliyay duullaan ba’an oo aanay inta badan kasoo warramin warbaahinada.
Warbixintan ayaa lagu daah-furay sheekada Mucalim Abdiyow Fillow oo ahaa Aabe 45 sano jir ah oo diyaaradaha Mareykanka ay ku dileen tuulo lagu magacaabo ilimey oo ka tirsan gobolka Sh/hoose, Macalin Cabdiyow ayaa lala dilay gabadh 17 sano jir ahayd oo uu dhalay xilli ay ku wada sugnaayeen goob ganacsi oo uu qoysku lahaa sida lagu sheegay warbixinta.
Markii uu talada ka degay Buushka, madaxweynihii isaga xigay ee Obama ayaa si rasmi ah Soomaaliya uga bilaabay duqeymaha xagga cirka ah ee loo adeegsado diyaaradaha Drones-ta, tan iyo wixii markaas ka dambeeyeyna waxay dowladda Mareykankii sii laba jibaartay duqeymaha xagga cirka ah ee ay ka geysaneyso Soomaaliya, iyadoo sanadba sanadka xiga ay sii kordhayaan tirada duqeymaha ay geysanayaan ciidamada Mareykanka.
Warbixinta waxaa lagu sheegay inuu Mareykanku ku andacoodo in duqeymaha uu ka wado Soomaaliya ay ku beegsadaan saraakiil iyo madax halis ku ah amniga Mareykanka iyo muwaadiniintiisa balse waxaa taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICA ku adag inay qeexaan ama cadeeyaan magaca iyo shakhsiyada qofka ay beegsadeen si loo ogaado xaqiiqda waxay ku doodayaan, taas badalkeedna waxay warbixintu sheegtay in dadka la beegsado ay ku jiraan dad shacab oo aan dagaalba kujirin iskaba dhaaf inay halis ku hayaan amniga Mareykanka’e.
Sida ay sheegtay shabakada “The War Horse” wax waliba waxay sii xumaadeen markii uu talada dalka Mareykanka gacanta ku dhigay Donald Trump, kaas oo qeybo kamid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya u aqoonsaday aag dagaal oo ay tahay in lagu beegsado cid waliba, islamarkaana uu saraakiisha ciidamada Mareykanka ee Africa siiyey awood dheeraad ah oo ay ku fulin karaan duqeymo aysan kala tashan hogaanka sare ee military-ga.
Donald Bolduc waa General howlgab ah oo katirsanaa ciidamada Mareykanka, intii u dhexeysay sanadihii 2015 ilaa 2017 wuxuu ahaa abaanduulaha howlgalada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka ee Africa, wuxuu tilmaamayaa in xeerkii hore ee lagu shaqeyn jiray uu dhigayey in cadeymo xaqiiqda u dhow laga keeno hadafka la beegsanayo iyadoo la adeegsanayo jawaasiis, muuqaallo video ah iyo dhamaan qalabyada indha indheynta balse wuxuu tilmaamay in markii dambe la khafiifiyey xeerka ka degsan xaqiijinta hadafka la beegsanayo.
Muddo lagu qiyaasay 13 sano iyo lix bilood gudahood, waxay diyaaradaha Mareykanka Soomaaliiya ka geysteen ugu yaraan 228 duqeyn kuwaas oo geystay khasaare xoogan balse arinta la yaabka leh ayaa ah in Mareykanka uu ku doodayo in dhamaan duqeymahaas uu ku dilay 4 ruux oo shacab ah oo kaliya, taas oo ah mid ka fog xaqiiqda marka la eego qeylo-dhaanta hay’adaha daraasaatka ee gorfeeya loolanka kasocda Soomaaliya.
“kuwani ma garanayaan cida ay dilayaan iyo cidda ay la dagaalamayaan, mana doonayaan inay qirtaan dhibaatooyinka ay geysteen iyo dadka ay laayeen sababtoo ah haddii ay qirtaan waxay ku noqoneysaa dambiyo dagaal oo kujira safaxaatkooda madow” sidaas waxaa yiri sarkaal katirsan Amnesty international.
Laba sano kahor inta uu talada la wareegin, Abaanduulaha ciidamada Mareykanka ee Africa, ninka lagu magacaabo Steven Townsend, wuxuu sheegay in eedeymaha sheegaya inay beegsadaan dad shacab ah ay yihiin kuwo ka bad-badis ah, isagoo tilmaamay inay baaritaan ku sameeyaan dhacdo kasta oo ay geystaan si loo ogaado haddii ay shacab ku dileen iyo haddii kale balse warbixintu waxay leedahay waxaaba laga shakisan yahay hufnaanta baaritaanada ay sameeyaan iyo cidda ay wareystaan.
Qodobada ay baarayaashu ku dhaliileen warbixintaas waxaa kamid ah in aysan jirin hal qof oo goobjooge ah ama dadka deegaanka ah oo ay wareysteen, islamarkaana lagu soo gudbiyey ugu yaraan 37 dhacdo oo ay sheekeynayaan dadkii geystay oo kaliya, islamarkaana aysan jirin garab ka baxsan iyaga oo taageeraya ama ka hor imaanaya riwaayadooda.
Shabakada “The War Horse” waxay sheegtay in inkastoo ay duqeymaha Mareykanka sii xoogeysteen, khasaaraha shacabkuna sii kordhayo maalin maalinta ka dambeysa, in hadana weeraradan aysan xaqiijin hadafkii laga lahaa ee ahaa in lagu wiiqo awoodda Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. “inkastoo Mareykanka uu wax waliba sameeyey saddexdii sano ee la soo dhaafay, hadana halista Al-Shabaab weli waa mid joogta ah” ayaa lagu yiri warbixinta iyadoo soo xiganeysa warbixin bishii Febraayo ee sanadkan loo gudbiyey golaha Congresska taas oo ay saraakiisha Mareykanku ku qireen inay sii xoogeysatay awoodda Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Warbixinta loo gudbiyey Congresska oo qeyb ka ahayd warbixino 4tii biloodba mar loo gudbiyo Congresska Mareykanka, ayaa si gaar ah diiradda u saareysay afartii bilood ee ugu dambeysay ee sanadkii 2019-ka, waxaana warbixinta ku cadeyd inay marxaladaas Mujaahidiintu qaadeen weeraro ballaaran oo uu ku jiray duullaankii Manda Bay ee dalka Kenya, kaas oo lagu dilay tobanaan ciidamo Mareykanka, laguna burburiyey agab military oo ay ku jiraan diyaarado dagaal.
“Inkastoo ay sii socdaan duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya iyo taageerada ay Washington siineyso ciidamada Afrikaanta ee jooga wadanka, hadana Al-Shabaab waxay u muuqataa mid sii kobceysa oo u hanqal taageysa inay nagu beegsato dalkeena” ayaa lagu yiri warbixinta loo gudbiyey golaha Congresska ee Mareykanka.